Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Nin Naagtaada Doonayaa Inantaada Ma Yeelo
Nin Naagtaada Doonayaa Inantaada Ma Yeelo
Jan 19, 2013 SOMALI NEWS 1
Wiil Ciise Jabuuti buu daarad u raadinayaaye maamul iyo dawladnimo Somaliland ma rabo, nabad-galyo iyo dimuqraadiyadna dan kama laha. Halkanna waxay u joogaan fulinta siyaasadaha ismaaciil cumar geelle ee ka dhan ka ah horumarka iyo dimuqraadiyada Somaliland.
Baroortu orgiga way ka wayntahay, Waxa ay ku dagaalamayaanina maaha Somaliland gudaheeda ee waa kuraasta Somalia ee ay reer Awdal ka boobeen Ee shirkii Carta lagu sharfay Ina cumar geelle.
Nimankii liiskii UDUB kusoo baxay ee toban sano codkayga igu xukumayay ee aan raalli kaga ahaa, maanta markii codkaygii iyo koogii la kala saaray ee runtii timid beentiina daaqadda ka baxday ma xoogbay wax ku rabaan.
Nidaamkii wax lagu doortay ayaa looga tanaasulay dartood iyo samo-talisnimo, Samaroon wuxu yiri walaalkayoow soo dhawow waxba kuuma diidani labada kursi mid ku fadhiiso, si aan degmadeena iyo dadkeenna u horumarinno somaliland nabadgalyadeedana u ilaalinno, way diideen.
Xukuumadiibaa xilal iyo xoolaba miiska usoo dhigtay, way diideen. Xagay usocdaan, arinka jabuuti wadato sow in la iska garto maaha.
Cawaale oo reer Boorama ahaa alla ha unaxariistee wuxu odhan jiray Alaahu akbar hadday masaajidka soo dhaafto halla iska celiyo.
Waxaba khalad ahayd in kursiga maayerkuxigeenka loo baneeyo, waayo tanaasulka la muujiyay wuxu dhiiri-galin siinayaa damacooda. Waxa laga yaabaa inay is tuseen In hadii ay kusii adkeystaan diidmadooda kursiga maayerkana looga kici doono
Beesha dhexe oo gacmaheeda iyo afkeeda ku dumisay somaliland markay beesha jabuuti damaca ku beereen Cawaaloow Gadabuursi Ugaaskay Calmadaan Halka Loogu Cayaaro ee lagu saaro caleenta ee dadkiisu uu ugu ciyaaro cir inuu ku darooro cisibaan u lahayn, Dib u jaleec...
One thought on “Nin Naagtaada Doonayaa Inantaada Ma Yeelo”
abdi ogle 01/20/2013 at 10:13 am
aduunyada ninka dhiman wax walba wu arkaya waaba baad cadiye weligay man arag mana maqal nin ku yidhi xeedhan bariiskeen cunayo gacanta ila soo geli oo ila cun walaal ninka gurigaad dhaxanta ka soo gelinayso doonaya inuu dab qabad siiyo isagaa cirka roob ku og 4 xabo ciisa ha yidhaahdan hadan lay siin anigu isaaq baan ahay gadarburso haday ciise xabad ridaan ila jabuuti haysla olosho 4 xabe ciisana bada ku shuba ka dib isku fura saylac ilaa jabuti wa salaamu calaykim